MUUQAAL: Sucuudiga oo ku Hanjabay inuu Sameysaneyso hubka Nukliyeerka | Entertainment and News Site
Home » News » MUUQAAL: Sucuudiga oo ku Hanjabay inuu Sameysaneyso hubka Nukliyeerka
MUUQAAL: Sucuudiga oo ku Hanjabay inuu Sameysaneyso hubka Nukliyeerka
daajis.com:- Sacuudiga ayaa ku goodisay inay samaysan doonto hub nukliyeer ah haddii Iiraan oo ay gobolka isku hayaan ay samaysato hubkaas.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa warbaahinta Maraykanka laga leeyahay ee CBS News u sheegay in dalkiisu uusan rabin inuu samaysto Nukliyer.
“Shaki kuma jiro haddii ay Iiraan samaysato bam Nukliyeer ah in markaas anaguna aan sidaasoo kale yeeli doono waliba sida ugu dhakhsaha badan”. ayuu yiri Amiir Maxamed.
Iiraan ayaa xaddiday barnaamijkeeda Nukliyeerka sannadkii 2015kii, ka dib markii ay heshiis la gashay qaar ka mid ah dalalka ugu ugu awoodda wayn caalamka – balse madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku goodiyay in uu heshiiskaas ka bixi doono.